India hanatevin-daharana an'i Shina amin'ny fandraràna ny vola crypto tsy miankina rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India hanatevin-daharana an'i Shina amin'ny fandraràna ny vola crypto tsy miankina rehetra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
India hanatevin-daharana an'i Shina amin'ny fandraràna ny vola crypto tsy miankina
Nofoanana tamin'ny Aprily 2020 ny fandraràna teo aloha an'i India momba ny cryptocurrency, izay nitarika ny tsenan'ny cryptocurrency miroborobo.
Nisy volavolan-dalàna vaovao izay hamorona rafitra hananganana vola nomerika ofisialy sy 'mandrara ny vola crypto tsy miankina rehetra ao India' dia nampiana tao amin'ny fandaharam-potoana ho avy ho an'ny parlemanta India.
Nisy drafitra handrara ny vola crypto tsy miankina rehetra tonga andro vitsivitsy taorian'izay Ny praiminisitra India Narendra Modi ny zavatra miady hevitra toy ny bitcoin dia mety hiafara amin'ny 'tanana diso ary 'manimba ny fahatanoranay.'
Ny tolo-kevitra vaovao dia nambaran'ny Lok Sabha, mpikambana ao amin'ny Indiany tranon'ny solontena. Hiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny mpanao lalàna izany rehefa hivory amin’ny fotoam-pivoriana ririnina amin’ny 29 novambra izao.
IndiaNofoanana ny fandraràna teo aloha momba ny cryptocurrency tamin'ny Aprily 2020, nitarika ny tsenan'ny cryptocurrency miroborobo. Na dia tsy misy angon-drakitra ofisialy aza, ny tombantomban'ny indostrian'ny Reuters dia nametraka ny isan'ny mpampiasa vola crypto ao India eo anelanelan'ny 15 sy 20 tapitrisa, miaraka amin'ny fananana mitentina 400 lavitrisa rupees ($5.4 lavitrisa).
Tsy dia nazoto loatra anefa ny governemanta foibe New Delhi. Tamin'ny herinandro lasa, PM Modi Nilaza izy fa "zava-dehibe ny fiaraha-miasan'ny firenena demokratika rehetra" amin'ny vola crypto toy ny bitcoin, ary "miantoka fa tsy hiafara amin'ny tanana diso izany, izay mety hanimba ny tanorantsika."
Ny banky foibe ao India dia naneho “fanahiana lehibe” momba ny vola crypto tsy miankina toy ny bitcoin na ethereum, ary nilaza tamin'ny volana Jona fa miasa amin'ny vola nomerika azy manokana izy io, izay hampidirina amin'ny faran'ny taona.
Nandrara tsara ny bitcoin i Shina tamin'ny volana septambra, nandrara ny hetsika ara-barotra rehetra mifandraika amin'ny crypto ao an-trano ary nandrara ny fifanakalozana vahiny tsy hanao raharaham-barotra amin'ireo mpampiasa vola amin'ny tanibe.
Mandritra izany fotoana izany, ny firenena Amerikana Afovoany any El Salvador dia nanambara ny tombam-bidy ara-dalàna bitcoin miaraka amin'ny dolara amerikana, ary nanangana toeram-pitrandrahana crypto tohanan'ny angovo geothermal avy amin'ny volkano.